Sicirada sarreysa 5 Qaababka Muujinta ama Tilmaamaha Kaydinta Xogta
Webka xoqitaanku waa nooc ka mid ah soo saaridda xogta ama qoditaanka macdanta. Himilada farsamadani waa in la helo macluumaad faa'iido leh oo ka socda bogagyo kala duwan oo u bedelaya qaababka la fahmi karo sida waraaqaha waraaqaha, CSV iyo macluumaadka. Waxaa ammaan ah in la xuso in ay jiraan waxyaabo badan oo suurtogal ah oo laga yaabo in xogta la tirtiro, iyo machadyada dadweynaha, ganacsatada, xirfadlayaasha, cilmi baarayaasha iyo ururada aan macaash doonka aheyn xogta maalin kasta. Ka saarida xogta la beegsanayo ee ka imaanaya blogyada iyo goobaha waxay naga caawiyaan inaan qaadno go'aano wax ku ool ah oo ku saabsan ganacsigeena. Faahfaahinta shanta ee soo socota ama farsamooyinka soo kabashada waxtarkoodu waa maalmahaas - buy military hats online.
1. Mawduucyada HTML
Dhammaan boggaga internetka waxaa lagu xakumay HTML, taas oo loo tixgelinayo luqadda aasaasiga ah ee loogu talagalay horumarinta bogagga. Macluumaadkan ama farsamada xoqitaanka mawduucyada, content ee lagu qeexay qaabab HTML waxay u muuqdaan garaafyada waxaana lagu xoqanayaa qaab la aqrisan karo. Ulajeedada farsamadani waa in la akhriyo dukumiintiyada HTML waxayna u beddelaan bogagga shabakada ee muuqda. Qaabdhismeedka Macluumaadka (Grabber Content) waa nooca qalab wax lagu tirtiro kaas oo ka caawiya in laga soo qaado xogta dukumiintiga HTML si fudud.
2. Farsamaynta Website-ga Dynamic
Waxay noqoneysaa mid caqabad ku ah inay fuliso xog-ururinta goobaha kala duwan ee firfircoon. Sidaas, waxaad u baahan tahay inaad fahamto sida Javasku u shaqeyso iyo sida loo soo saaro xogta laga helo bogagga internetka ee la wadaagayo. Isticmaalka qoraallada HTML, tusaale ahaan, waxaad u beddeli kartaa xogta unorganized qaab qaabeysan, kobcinta ganacsigaaga internetka iyo hagaajinta waxqabadka guud ee website-kaaga. Si aad si sax ah u soo qaadato xogta, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho barnaamijka saxda ah sida soo dejinta. io, kaas oo u baahan in la hagaajiyo wax yar si markaa waxqabadka firfircoon ee aad hesho uu yahay ilaa calaamadda.
Habka XPath waa arrin muhiim ah oo ka mid ah shabakadda webka . Waa ereyga caadiga ah ee lagu doorto waxyaabaha ku jira qaababka XML iyo HTML. Waqti kasta oo aad ku muujiso xogta aad rabto inaad soo saaro, warshadaga aad dooratay ayaa isku beddeli doonta foomka la akhrin karo oo la karabi karo. Inta badan qalabka adeegga shabakadda waxay ka soo saari karaan macluumaadka bogagga internetka oo kaliya marka aad muujinayso xogta, laakiin qalabyada XPath ku salaysan waxay ku maareeyaan xulashada xogta iyo saarista adigoo ka wakiil ah samaynta shaqadaada.
4. Calaamadaha rasmiga ah
Hadalka caadiga ah, way sahlan tahay inaan qorno ereyada rabitaanka ee ku jirta xarafka iyo soo saar qoraal qoraal ah oo ka baxsan website-yada weyn. Isticmaalka Kimono, waxaad samayn kartaa hawlo kala duwan oo ku saabsan internetka waxayna u maamuli karaan hadallada sida caadiga ah u socda. Tusaale ahaan, haddii bogga keliya ee ku jira cinwaanka oo dhan iyo faahfaahinta xiriirka shirkad, waxaad si fudud u heli kartaa oo u kaydin kartaa xogtan iyada oo la adeegsanayo Kimono sida barnaamijyada kaydinta webka. Waxaad sidoo kale isku dayi kartaa tibaaxo joogto ah si aad u kala qaybisid qoraalada cinwaanada si gaar ah loogu talagalay si sahlan.
5. Bogagga shabakadaha ee la xoqay ayaa laga yaabaa inay qaataan qurxinta quruxda, qoraallada ama metadata, iyo macluumaadkan loo isticmaalo si loo helo helitaanka xogta gaarka ah. Haddii faahfaahin lagu soo galo bogga internetka, aqoonsiga qeexida 'semantic' waa farsamada kaliya ee soo bandhigi doona natiijooyinkii la rabay oo lagu keydiyo xogtaada la soo saaray iyada oo aanad ka tashan tayada. Sidaa darteed, waxaad isticmaali kartaa shabakadda webka kaas oo ka soo bixi kara qorshaha xogta iyo tilmaamo waxtar leh oo laga helo bogag kala duwan oo si habboon leh.